३३ किलाे सुन प्रकरणः प्रतिवादीलार्इ थुनामा राख्नेकी तारेखमा छाेड्ने ? - www.kchhakhabar.com
३३ किलाे सुन प्रकरणः प्रतिवादीलार्इ थुनामा राख्नेकी तारेखमा छाेड्ने ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख २८, २०७५ समय: १२:२६:०४
विराटनगर । विमानस्थलबाट ल्याएको साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याकाण्डका अभियुक्तबारे जिल्ला अदालत मोरङमा बिहीबारदेखी थुनछेक बहस सुरू भएको छ । जिल्ला न्यायाधीश नारायण प्रसाद शर्माको इजलासमा बहस सुरु भएको हो ।
यो मुद्दामा ८ सरकारी वकिलको टिम बनेको छ । पहिलो दिन तीन जना सरकारी वकिल बहस गरे । जसमा सहन्यायाधीवक्ता गोपाल रिजाल, जिल्ला न्याधिवत्ता पुन्यप्रसाद पाठक, उच्च अदालतका निमित सह न्यायाधीवक्ता मनोज आचार्यले बहस गरेका थिए । बाँकी रहेका पाँच जना वकिललको समय अभावले गर्दा शुक्रबार बहस गर्ने जिल्ला अदालत मोरङले जनाएको छ ।
बादीकोतर्फबाट सरकारी वकिलले बहस गरेपछि प्रतिबादीतर्फका कानुन व्यवसायीहरुको बहस गर्ने मोरङ अदालतका स्रेस्तेदार नवराज दुलालले जानकारी ददिनुभयो । उनका अनुसार ३० जना प्रतिबादीको तर्फबाट बहस गर्न बिहीबारसम्म ७९ जना कानुन व्यवसयाीहरुले मोरङ अदालतमा वाकलतनामा दर्ता गराएको बताए । बहस गर्नुभन्दा केही बेरसम्म वाकलतनामा दर्ता गर्न पाउने भएकोले यो संख्या थप बढनेछ । एक जना प्रतिबादीले ३ देखी ४ जनासम्म कानुन व्यवसायीहरु राखेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रतिबादीकोतर्फबाट बहस गर्न अभियुक्तहरुले काठमाण्डौदेखीका नाम चलेका कानुन व्यवसायीहरुलाई ‘हायर’ गरी ल्याएका छन् । नाम चलेको कानुन व्यवसयाहीरले पक्राउ परेको उच्च तहका प्रहरी अधिकारीदेखी एयरलाइन्सका कर्मचारीको पक्षमा बहस गर्ने भएका छन् । काठमाण्डौबाट नाम चलेका एक दर्जन कानुन व्यवसायीहरु आएका छन् । बहस गर्न उनीहरु विराटनगर आइसकेका छन् । थुनछेक बहस सुरु भएको पहिलो दिन प्रतिबादीतर्फको कानुन व्ययवसीहरुले इजालस भरिभराउ देखिन्थो । मोरङ, सुनसरी, झापालगायतका जिल्लाहरुबाट समेत प्रतिबादीतर्फका कानुन व्यवसाहीहरुले बहस गर्नेछन् ।
काठमाण्डौबाट बरिष्ठ अधिवक्ता सम्भू थापा, रमन श्रेष्ठ, यदुनाथ खनाल, शुशिल पन्त, अधिबक्ता उद्धब केसी, मनिषा बस्नेत, रमिता महर्जनले बहस गर्न अदालतमा वकालातनामा दर्ता गराइसकेका छन् । प्रतिबादीकोतर्फबाट बहस गर्ने सबैभन्दा बढी मोरङका कानुन व्यवसाहीहरु छन् । मोरङबाट मात्र करिब ३० जना कानुन व्यवसायीहरु रहेको बताइएको छ ।
त्यस्तै अधिवक्ताहरू देवीबहादुर घिमिरे, हेमराज पन्त, विकास थापा, देवेन्द्र कोइराला, नारायण वस्ती, रामप्रसाद भण्डारी, शान्तिराम भण्डारी, रूपेश कोइराला, दीपक खतिवडा, यमबहादुर मगर, पुरुषतम नेपाल, लक्ष्मण न्यौपाने, मधुसुधन चौधरी, भक्ति माझी, विश्वराम भट्टराई, रेखा थापा, कविता बस्नेत, पुष्करचन्द्र घिमिरे, खगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, डिल्लीबहादुर कार्की, डिल्लीराम घिमिरे, अशोक पोखरेल, मोहन कोइराला, टंक उप्रेतीलगाय गरी ३० जना अभियुक्तको तर्फबाट बहस गर्नेछन् । एक जना प्रतिबादीले ३ देखी ५ वटा सम्म कानुन व्यवसायीहरु राखेको स्रोतले बताए ।
थुनछेक बहस सकिएपछि प्रतिबादीहरुलाई थुनामा राखेर सुनुवाइ गर्ने कि धरौटी वा तारेखमा राखेर न्यादिसले आदेश गर्ने हो । सम्भत बाढीमा मंगलबार र छिटोमा सोमबारसम्म आदेश आइसक्ने कानुन व्यवसायहीरको भनाई छ । प्रहरीले अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य बेलाको भन्दा बिहीबार कडा पारेको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङले सुन तस्करीमा संलग्न भएको भन्दै नेपाल प्रहरीका ९ अधिकारी र तस्करको समूह गरी ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा गत बुधबार मुद्दा दायर गरेको थियो ।